Sidee Kor Loogu Qaadi Kara Tayada Isbitaallada Dawladda?
Sunday June 09, 2019 - 16:06:02 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Waxa dhab ah in tayada adeegga caafimaad ee laga bixiyo isbitaallda dawladdu ka hooseeyo kuwa gaarka loo leeyahay. Waxa ay ila tahay sobobta ugu weyni in ay tahay dhaqaale la’aan. Waxa aan soo jeedin lahaa in arrimaha soo socda bal la isla eego.
1. In Isbitaallda laga beddelo magaca ah Isbitaalka Dawladda oo loo bixiyo Isbitaalka Bulshada ama Dadweynaha (Community Hospital).
2. In bulshadu ka qayb qaadato maal galinta iyo maamulka isbitaalada oo loo sameeyo guddi samafaleyaal ah oo aan ahayn hunguri ama macaash doon laakiin ah magac iyo ajar (board of directors) sida gancsatada waaweyn iyo daka shaqooyinka ka nastay
(retirees). Guddidaa ayaa u xil siraan ururinta saqadda, qiimaynta tayada hawl maalmeedka, xalinta khilaafadka iyo qorista shaqaalaha.
3. In wasaaradda maaliyaddu isbitaallada bulashada u aqoonsato goobo ay ku baxdo
sadaqadu (charitable organization) qofka kasta oo lacag ugu deeqaana uu inta uu ku deeqay in le’eg oo cashuur dhaaf ah helo haddii uu wax soo dejisanayo ama cashhuraha kale uu ka bixiyo dhulka, meheradda IWM. Qofku marka uu lacaq ugu deeqo Isbitaalka,
waxa la siinayaa Juwan ama Receipt uu tusayo cidda cashuurta ka qaadaysa. Dabcan
Juwan waliba mar kale ayuu shaqaynaya sannakii.
4. Isbitaaladu waxa ay leeyihiin dhul. Waa in dadka dhulkaa dhigta baabuurta laga qaada
lacag saacadiiba sida ta madaarka. Cidda sidda qof buka ama qaadaysa qof la saaray
iyaga waxa loo cayimi karaa goo gara. Isbitaalalda waa in ay kiro ka qaadaan dadka
meheradaha ku leh dhulka isbitaallada.
5. In shaqaalaha ka hawl gala isbitaalldu noocay doonaan noqdee lagu lacag siiyo inta
saacadood ee ay shaqeeyaan. Tusaale ahaan in dhakhtarka la siiyo saacaddii 20-30
dollar/saacadii, kalkaaliyahana 10-15 dollar.
Waxa laga yaabaa marka la isku daro kharashka xukuumaddu siiso isbitallada, ta
dadweynuu ku darsadaan iyo wixii bukaanka la qaadi karo haddii si fiican loo maamulo
ay wax weyni is ka beddeli doonaan tayada isbitaallda bulshada oo immika aad u liidata.
Fikradaha aan kor ku xusay ma aha in si dooda loo qaato. Waxbaa lagu dari karaa, laga
beddeli karaa waana la iska iska tuuri karaa.